Umlingo weMerivale. I-oasis yabucala kwindawo entle.
Isitudiyo esihle esizimele kwindawo entle esecaleni kwesixeko. Kufuphi neendawo zokutyela ezothusayo, umgama wokuhamba ukuya eMerivale Mall, izibhedlele, iziko lesixeko, ii-pubs, kunye neHagley Park.
Esi situdiyo sesicwangciso esivulekileyo sale mihla sinegumbi lokuhlambela elimangalisayo elinokukhanya okubonakalayo kunye nentloko yeshawari yeBluetooth. Kushushu kwaye kunelanga ngempompo yobushushu kunye neglazing ephindwe kabini.
Ukufikelela ngokuthe ngqo kwindawo yabucala ebiyelwe ngokupheleleyo enegumbi eligqunyiweyo ''igumbi langaphandle'' elinesifudumezi segesi. Intabalala yokupaka esitratweni ngaphandle. Ukufikelela kwinqanaba.
Umxube we-eclectic weluxe, i-retro, kunye ne-rustic. Ingaphandle ''igumbi'' likulungele ukuphumla elangeni, kwisitulo esijingayo, okanye kwibhedi epholileyo. Indawo ibiyelwe ngokupheleleyo kwaye yabucala. I-Microwave, i-oven ye-benchtop, ifriji, i-toaster, ijug, kunye nomatshini weNespresso zikuvumela ukuba upheke ukutya okusisiseko.
IMerivale/St Albans yindawo ethandekayo enokufikelela ngokulula kwizinto ezininzi-isikhululo seenqwelomoya, iipaki, izibhedlele, iRiverside.
Ekhaya ngorhatya nangeempelaveki- ndonwabile ukuncokola.